बाँकेमा थप ८ जनामा कोरोना सहित देशभरमा ९० जना संक्रमित थपिए – BANKE POST
१३ जेष्ठ, नेपालगन्ज । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पछिल्लो २४ घण्टामा देशभरमा ९० जना संक्रमित थपिएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बिकास देवकोटाले मंगलबार थप ९० जनामा कोरोना संक्रमण रहेको पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो । बाँकेमा थप ८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
यस्तै कपिलवस्तुमा २६, अर्घाखाँचीमा २, गुल्मीमा २, रुपन्देहीमा १, कैलालीका १, अछामका १, स्याङजाका २, सुर्खेतमा १२ जना नयाँ संक्रमित भेटिएको मन्त्रलायका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
सो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ७७२ पुगेको छ। त्यस्तै मंगलबार ४३ जना कोरोना संक्रमित उपचारपछि अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको मन्त्रालयले बताएको छ ।
उनीहरु नारायणी अस्पतालबाट डिस्चार्ज भई घर फर्केका हुन । डिस्चार्ज हुनेमा २ महिला र ४१ पुरुष रहेका छन् । योसँगै उपचारपछि निको भएर घर फर्कनेको संख्या १५५ पुगेको छ। हालसम्म १ सय ५५ जना निको भएका छन् भने ४ जनाको मृत्यु भएको छ ।